नयाँ वर्ष, पोस्टकार्ड अनि ती सायरीहरू | नेपाली पब्लिक नयाँ वर्ष, पोस्टकार्ड अनि ती सायरीहरू | नेपाली पब्लिक
होमपेज / ब्लग | समाज |
नयाँ वर्ष, पोस्टकार्ड अनि ती सायरीहरू
नेपाली पब्लिक २०७५, ३० चैत्र शनिबार १९:३९
सुजाता निङ्लेकु, काठमाडौँ – त्यो समय, सायद झन्डै २ दशकअघि। जब चैत महिना अन्त्य हुँदै जान्थ्यो, हरेक पसलका अघिल्तिरै सबैले देख्नेगरी नेपाली र भारतीय ‘हिरो–हिरोइन’को पोस्टकार्ड झुण्ड्याइएको हुन्थ्यो।
हामी ती पोस्टकार्ड किन्थ्यौँ। अनि साथीभाइ, आफन्त र बढीजसो ‘मन परेका’हरूलाई आदानप्रदान गर्थ्याैं शुभकामनासहित। प्रायः ‘हातेपत्र’का रूपमा। र, पोस्टकार्डमा लेख्थ्यौँ सायरीहरू:
मन मिल्ने अनि आफूलाई मन पर्ने साथीहरूबीच पोस्टकार्डमा यस्तै मनका भावनाहरू लेखेर आपसमा शुभकामना साटासाट गर्थ्याैं। यो सम्झिँदा म अझै ‘नोस्टाल्जिक’ हुन्छु। र, मजस्तै अरूलाई पनि ‘नोस्टाल्जिक’ बनाउँछ होला- नयाँ वर्ष, पोस्टकार्ड र सायरीहरूले।
त्यो समयमा भारतीय हिरो-हिरोइनहरूको फोटो भएको पोस्टकार्डको एक रुपैयाँ पर्थ्यो। १ दर्जन किने १० रुपैयाँमै पनि पाइन्थे। ऊ बेलाका चल्तापुर्जा कलाकारहरू दिव्या भारती, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षितको पोस्टकार्ड धेरैको रोजाइमा पर्थे। नेपाली कलाकारहरूको फोटो भएको पोस्टकार्ड चाहिँ २ देखि ५ रुपैयाँसम्म पर्दथ्यो। अहिलेका पुस्ताका लागि यो सबै ‘एकादेशको कथा’झैँ हुन्छ।
मलाई त्यो बेला निरुता सिंह असाध्यै मन पर्ने नायिका थिइन्। म उनैको फोटो भएको पोस्टकार्ड किन्थेँ र साथीभाइलाई पठाउँथेँ। शब्द कुँदेर, सायरी भरेर। स्कूले जीवनमा पैसाको जोहो गर्न गाह्रै थियो। म चाहिँ आमालाई टिफिन खाने भनेर पैसा माग्थेँ र त्यही पैसा बचाउँथेँ।
त्यसरी जोगाएको पैसाले किनेको पोस्टकार्ड अनि त्यसमा सायरी। र, त्यो पोस्टकार्डमा मिल्ने साथी, अझ एकतर्फी नै सही ‘मन पर्ने’ साथीको नाम। त्यसपछि कापीको पन्नाबाट बनाइएको खामभित्र पोस्टकार्डमै आउने प्रत्युत्तर। एकतमासको खुशी मिल्थ्यो उसबेला।
एकअर्काले ‘यो फलानोलाई देऊ है’ भन्दै आदानप्रदान गर्ने क्रममा कहिले आफू माध्यम बन्ने त कहिले साथीलाई माध्यम बनाउने ती दिनहरू सम्झँदा अझै मन रोमाञ्चित हुन्छ। जब नयाँ वर्षको बिहानीले आशाको किरण छर्दै वैशाख १ गतेबाट प्रवेश गर्दछ अनि अर्को आनन्द हुन्थ्यो, साथीभाइ मिलेर पिकनिक जाँदा।
घरघरबाट चामल, दाल, आलु र तेल जम्मा गरेर अनि भाडामा लिएको क्यामेरामा (रिल चाहिँ आपसमा जम्मा पारेको पैसाले किनिन्थ्यो) लुगा फेर्दै अनि रिल गनी गनी फोटो खिच्दाको पलहरू अझै ताजा छ। तर ती दिन फेरि आउला र? त्यो बेला शुभकामना र सम्झनाको अर्को माध्यम ‘अटो डायरी’ पनि थियो। उसबेला अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जालहरूको तिर्सना तिनै डायरीले मेटिन्थ्यो, मेटाउँथ्यौँ।
नयाँ वर्षले साल, महिना र बार मात्र परिवर्तन हुँदैन। जीवन, जगत् र शैलीहरू वर्षेनि फेरिन्छन्। यसैगरी नयाँ वर्ष मनाउने शैलीहरू पनि फेरिए। समय र सालसँगै मन फेरिए। पोस्टकार्डको जमाना त ‘इतिहास’ भयो नै, सुनौला अक्षरले लेखिने सायरी पनि ‘लोप’ हुँदै गए।
हुनत घरमा बसीबसी गुगलमा खोजेर आफूलाई मन परेको शुभकामना कार्डहरू डाउनलोड गरेर साथीभाइलाई फेसबुक, म्यासेन्जर, इमो, भाइबरजस्ता माध्यमबाट पनि पठाउन सकिन्छ। प्रविधिको सदुपयोग गर्दे सूचना र सञ्चार माध्यमबाट जीवनशैली चलाउने बाटो सहज त भयो नै। तर पनि पुराना ती दिनहरू, ती यादहरू मनमा गडेर रहने रहेछ। जब नयाँ वर्ष लाग्छ। म सम्झिन्छु, ती पोस्टकार्ड र ती सायरीहरू।
एक दिन नयाँ वर्षको आगमनले मात्र पनि खुशी मिल्ने होइन। खुशी आफूभित्र नै खोज्ने हो। र कसरी खुशी हुने हो, त्यो पनि हरेक व्यक्तिमै भर पर्छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि नै सबैको जीवनमा सफलता, खुशी, हर्षको नयाँ अध्याय शुरु होस्। सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना !
‘अब जनताले सत्तासीनका शब्दजालमा भ्रमित…
राष्ट्रपतिद्वारा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सम्मानित
नयाँ वर्षको दिनमै हवाई दुर्घटना…
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहने…
नयाँ वर्षको स्वागतमा ‘फेवा नव…